SSD ကို | November 2019
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Adobe Flash Player ကို install လုပ်နည်း
အဓိက SSD ကို
Windows7ကိုဘို့စိတ်ကြိုက် SSD ကို
အပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့အတွက် SSD ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့, က Configure လုပ်ရမယ်။ ထို့အပြင်မှန်ကန်သော setting များကို drive ကို၏အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးသေချာပေမယ့်လည်းက၎င်း၏အသက်ကိုစောင့်ပါလိမ့်မယ်မသာ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် SSD ကိုများအတွက် setting များကိုစေရန်လိုအပ်သောသည်မည်မျှနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ Windows နဲ့ပို SSD ကို optimization အလုပ်လုပ် SSD ကို configuration ကိုနညျးလမျးမြားကို Windows7operating system ကို၏ဥပမာကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
SSD ကို drives တွေကိုတှငျအဘယျတစ်သက်တာ
သင်သည်သင်၏ system အတွက်တစ်ဦး disk ကို select လုပ်သည့်အခါ ပို. ပို. အသုံးပြုသူများက SSD ကိုပိုကြိုက်တယ်။ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရ - ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီနှစ်ခု parameters တွေကိုလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသက်ပေတည်း - သို့သော်အခြားမျှလျော့နည်းအရေးကြီးသော parameter သည်ရှိသေး၏။ ယနေ့ကျွန်တော်တစ်ဦး Solid-State Drive ကိုကြာရှည်ဦးမည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာ SSD ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး
အကြောင်းပြချက် 1: အဆိုပါ disc ကိုမကြာခဏနမပါအကျိုးဆက်အဖြစ်ကစနစ်မမြင်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအသစ်တခု disc ကိုနမပေးကြောင်းဖြစ်ပျက်နှင့်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုအောက်ပါ algorithm ကိုအညီတစ်ဦးကို manual mode မှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းတစ်ပြိုင်နက်«ဝင်း + R ကို»နှင့် compmgmt ဝင်, ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
အဆိုပါ Solid-State သံလိုက် disk တွေထံမှကွဲပြားခြားနားသည်အဘယ်သို့
နီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူ Solid-State သိုလှောင်မှုကိုကြားလိုက်ပါတယ်, အချို့ပင်သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့သော်များသောလူများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ, ဤ drives တွေကိုအကြားခြားနားချက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးကို SSD ကို HDD ကဘာလဲဆိုတာစဉ်းစား။ ဒီနေ့ခြားနားချက်ကဘာလဲဆိုတာပြောပြပြီးသေးငယ်တဲ့နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ဆွဲပါ။ သံလိုက် Scope SSDs ကနေဘာသာဂုဏ်ထူး SSDs နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးပွားလာနေသည်။
Disk ကိုကိုယ်ပွားအပေါငျးတို့သအစီအစဉ်များနှင့်ဒေတာများနှင့်အတူသင့် system recover ကူညီ, ဒါပေမယ့်လည်းလိုအပ်ပေါ်ထွန်းသည်မှန်လျှင်, တယောက်ကိုတယောက် disk ထဲကရွှေ့ဖို့ကလွယ်ကူစေမည်သာ။ အထူးသဖြင့်လေ့တယောက်ကိုတယောက် device ကိုအစားထိုးရန် drives တွေကိုပုံတူပွားခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် SSD ကိုတစ်ဦးကိုယ်ပွားကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူအောင်အချို့ tools တွေကိုကြည့်ပါ။
အမှားအယွင်းများများအတွက် SSD ကိုစစ်ဆေးမှုများ
Drive တခုခုကို၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်းနောက်ဆုံးမှာအမှားအယွင်းများအမျိုးမျိုးပေါ်လာလိမ့်မည်။ တချို့ရိုးရိုးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းငှါနေစဉ်, အခြားသူတွေနဲ့အပေါငျးတို့သ disc ကိုထွက်ခေါက်နိုင်ကြသည်။ ကအခါအားလျော်စွာ disk တွေ scan ရန်အကြံပြုသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမသာလိမ့်မည်ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်မှန်ကန်သော, ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောသိုလှောင်မှုမီဒီယာအပေါ်လိုအပ်သောဒေတာများကိုချွေတာ။
ယင်း၏ SSD ကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ထုတ်လုပ်သူများကသတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်ပါမည်သို့ပင်နှုန်းအသုံးပြုသူအမြဲအမှန်တကယ်အားလုံးစစျဆေးဖို့လိုသည်။ ဒါပေမယ့် drive ကိုမြန်နှုန်းမပေးနိုင် Third-party အစီအစဉ်များ၏အကူအညီမပါဘဲကြေညာဖို့နီးစပ်သည်မည်မျှသိရန်။ ကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျသညျအမြားဆုံးဖိုင်တွေဟာသံလိုက်သိုလှောင်ရေးကိရိယာ၏အလားတူရလာဒ်များနှင့်အတူ SSD ကိုကူးယူမည်သို့လျင်မြန်စွာနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
SSD ကို performance ကိုစစ်ဆေးနေ
SSD ကိုနည်းပညာအားဖြင့် wear-level တစ်ခုမဟုတ်ဘဲမြင့်မားတဲ့ဘဝကိုရှိပြီးထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုအောက်မှာလူတယောက်အာကာသသီးသန့်ဖယ်ထား။ သို့သော်ဒေတာအရှုံးကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ရေရှည်အသုံးပြုရန်, ကအခါအားလျော်စွာ disk ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်နိုင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ သငျသညျဒုတိယ-လက် MIC ၏ပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တဲ့အခါဒီသူတို့အားအခါသမယများအတွက်လည်းမှန်သည်။
Flash မှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစား Nande နှိုင်းယှဉ်ရန်
လောလောဆယ် ပို. ပို. လူကြိုက်များ SSDs သို့မဟုတ် SSD ကို (S olid S ကို Tate: D rive) ရရှိမှု။ ဤသည်ကြောင့်သူတို့က high-speed ကိုဖတ်ပါနှင့်ရေးလိုက်ဖိုင်တွေနှစ်ခုလုံးကိုပေးနိုငျသောအမှန်စင်စစ်, ကောင်းသောအယုံကြည်စိတ်ချရရန်ဖြစ်ပါသည်။ Nande - သမားရိုးကျ hard drives တွေကိုမတူဘဲရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများကိုအဘယ်သူမျှမနှင့်အထူး flash မှတ်ဉာဏ်အပေါ်ဒေတာသိုလှောင်မှုအဘို့, ရှိပါတယ်။
တယောက်ကိုတယောက် SSD ကိုကနေ system ကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်း
Reinstall လုပ်ဖို့မလိုဘဲတဦးတည်း SSD ကိုမှအခြားဖို့ operating system ကိုရွှေ့ပြောင်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းနှစ်ခုကိစ္စများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မူလအစ - ပိုပြီး capacious များအတွက်အစားထိုးစနစ်ကသိုလှောင်မှု, ဒုတိယ - ပျက်စီးခြင်းကြောင့်စီစဉ်ထားအစားထိုး။ အသုံးပြုသူများသည်အကြား SSD ကို၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရပေးထား, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသက်ဆိုင်ရာထက်ပိုပါတယ်။
DVD-ROM drive တခုဟာအစိုင်အခဲပြည်နယ် drive ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါ
သင်သည်တာရှည်သင့်ရဲ့ Laptop ကိုအတွက် DVD-drive ကိုသုံးစွဲဖို့စဲကြလျှင်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က SSD ကိုအတူကအစားထိုးအချိန်ပါပဲ။ သင်ဤဖြစ်နိုင်သောကြောင်းကိုမသိခဲ့တာလဲ ထိုအခါယနေ့ကျနော်တို့ကလုပ်ပေးနှင့်ဤလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်။ ဒါဟာသိပ်ဖြစ်ပါတယ် device ကိုအစား SSD ကိုထားဝမ်းသာပါတယ်ပါလိမ့်မယ် - အပေါငျးတို့သ "အပြစ်တွေ" နှင့်ကျနော်တို့က optical drive ကိုကြောင်းနိဂုံးသို့ရောက် လာ. "cons" အလေးချိန်ပြီးနောက်, ဒါကြောင့်လက်ပ်တော့များတွင်အစား DVD-drive ကို၏ SSD ကို install လုပ်နည်း။
ကွန်ပျူတာထဲမှာ SSD ကိုရွေးချယ်ခြင်း
လောလောဆယ် SSDs တဖြည်းဖြည်းသမားရိုးကျ hard drives တွေကိုအစားထိုးနေကြပါတယ်။ မကြာသေးမီကသည်အထိ SSD ကို၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏဖြစ်နှင့်များသောအားဖြင့်စနစ်တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်ဆိုပါက, သင်ယခု 1 terabytes သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့ drive ကိုစွမ်းရည်ရှိသည်။ ဤအ drives တွေကိုများ၏အားသာချက်များကိုသိသာများမှာ - ကတိတ်ဆိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စုစာအုပ်များအတွက် SSD ကို၏ရွေးချယ်မှုများအတွက်အကြံပြုချက်များ
အဆိုပါလက်တော့၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်အဆိုပါ solid state drive (SSD) ကိုရန်စက်မှု hard drive ကိုအစားထိုးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေတာသိုလှောင်ရေးကိရိယာ၏ညာဘက်ရွေးချယ်မှုအောင်ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားပါ။ အားသာချက်များ SSD ကို Laptop ကိုယုံကြည်စိတ်ချရ, အထူးသဖြင့်, သက်ရောက်မှုခုခံနှင့်ကျယ်ပြန့်တဲ့ operating အပူချိန်အကွာအဝေးပိုမိုဒီဂရီ။
အဆိုပါ SSD ကိုရန် HDD ကနေ operating system နဲ့အစီအစဉ်များကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦး SSD ကိုတစ်ဦးသည်သမားရိုးကျ hard drive ကိုအစားထိုးသိသိသာသာအလုပ်၏နှစျသိမျ့တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာသိုလှောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ အများအပြားအသုံးပြုသူများ SSD ကိုရန် HDD ကိုအစားထိုးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် drive ကိုအစားထိုး, သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့ထည့်သွင်းအစီအစဉ်များနှင့်အတူ၎င်း၏ operating system ကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
SSD ကိုသို့မဟုတ် HDD: လက်တော့များအတွက်အကောင်းဆုံး drive ကိုရှေးခယျြ
Laptop ပိုင်ရှင်တွေကိုမကြာခဏ သာ. ကောင်း၏ရာကိုတောင်း - တ hard drive ဒါမှမဟုတ်အစိုင်အခဲပြည်နယ် drive တခုဖြစ်တယ်။ ဒါကကို PC ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဒါမှမဟုတ်အုပ်ထိန်းသူများ၏ပျက်ကွက်တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကိုပေးမောင်းရာတစျခုထှကျတွက်ဆဖို့ကြိုးစားပါ။ တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်မှု interface ကို, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်စျေးနှုန်း, ပါဝါစားသုံးမှုနှင့် Defragmentation ၏အမြန်နှုန်း, ဆူညံသံ, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအဖြစ် parameters တွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်မည်။
တစ်ဦး desktop သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာဖို့ SSD ကိုချိတ်ဆက်ပါ
ကွန်ပျူတာအမျိုးမျိုးသော devices များချိတ်ဆက်ခြင်း, များစွာသောအသုံးပြုသူများကိရိယာကိုယ်ထည်တွင်တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်လျှင်, အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်အထူးသဖြင့်ဝါယာကြိုးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော connectors အများကြီး scares ။ ဒီနေ့စနစ်တကျကွန်ပျူတာဖို့ SSD ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောပြပါ။
ငါ SSD အပေါ်တစ်ဦး swap ဖိုင်လိုအပ်သလား
အဆိုပါ swap ဖိုင်၏အသုံးပြုမှုကိုတဆင့် Windows 10 ကိုစနစ် RAM ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများတွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကြီးစွန်း၏အသံအတိုးအကျယ်, ပြတင်းပေါက်သင့် hard drive ကိုအစီအစဉ်များနှင့်ဒေတာဖိုင်များကိုရှိရာလုဒ်တင်ထားခြင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အထူးဖိုင်ကိုဖန်တီးရှိရာ။ သိုလှောင်ရေးကိရိယာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ပို. ပို. လူတွေကိုဒီလိုအပ်သောသည်နှင့်တစ်ဦး SSD ကိုအပေါ် swap ဖိုင်ရှိမရှိအံ့သြနေကြသည်။
DOS ကို bootable flash drive ကို
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား drive ကိုသို့မဟုတ် SSD ကိုမှ Windows ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows7ကိုတစ်ဦးက ISO image ကိုဖန်တီးပေးဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျကှနျပြူတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတညျဆောကျခွငျးသို့မဟုတျရိုးရှင်းစွာကို USB port များရန်ဆုံးဖြတ်, ကွန်ပျူတာစနစ်ကယူနစ်၏ရှေ့ panel ကိုအပေါ်နားကြပ် output ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးရှိမရှိ - သင်ကအကြာတွင်ပြသပါလိမ့်မည်သည့် Motherboard ကမှအိမ်ရှေ့ panel ကို connectors ချိတ်ဆက်ဘယ်လိုအသုံးဝင်သတင်းအချက်အလက်။ မေးခွန်းရှေ့ကို USB port ကိုချိတ်ဆက်နှင့်နားကြပ်နှင့်ရှေ့ panel ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတစ်မိုက်ခရိုဖုန်းအလုပ်လုပ်ရပုံကိုပေါ်မသာဖြစ်, ဒါပေမယ့်လည်း Motherboard ကအတူအဓိက system ကိုယူနစ်ဒြပ်စင် (ခလုတ်ကိုနှင့်အာဏာညွှန်ပြချက်, hard drive ကိုလှုပ်ရှားမှုအလင်း) နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုမည် (ဒီနှင့်စတင်ရန်နှင့်အတူ) လက်ျာဘက်ကလုပ်ပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
အယ်ဒီတာ VideoPad Video Editor ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုအပေါ်တစ်ဦးစကားဝှက်ကို Set
https://termotools.com my.termotools.com © SSD ကို 2019